အမေရိကန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းနယ်စပ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု အရေအတွက်မှာ ဇွန်လ၌ နှစ်အလိုက် မြင့်မားသည့် အရေအတွက်သို့ ရောက်ရှိနေ - Xinhua News Agency
အမေရိကန်-မက္ကဆီကို နယ်စပ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများ ရောက်ရှိလာမှုသည် ဇွန်လတွင် နှစ်အလိုက် မြင့်မားသော အရေအတွက်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် အကောက်ခွန်နှင့် နယ်စပ်ကာကွယ်ရေး (CBP) က ဇူလိုင် ၁၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းအင်းအသစ်အရ သိရသည်။လူပေါင်း ၁၈၈,၈၂၉ ဦးသည် ဇွန်လက အမေရိကန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းနယ်စပ်မှတစ်ဆင့် အမေရိကန်သို့ ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းကြောင်း၊ မေလတွင် ၁၈၀,၆၄၁ ဦးရှိခဲ့ရာမှ ၅ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း CBP က ပြောခဲ့သည်။
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံကြား နယ်စပ်အား မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ Ciudad Juarez မြို့ဘက်ခြမ်းမှ ဖြတ်ကူးရန်ကြိုးပမ်းနေသော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဇွန်လရှိစုစုပေါင်း အရေအတွက်သည် အနည်းဆုံး ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း CBP မှ လစဉ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် အရေအတွက်များတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ဇွန်လ၏ အရေအတွက်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သော လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လာရောက်သည့်လူဦးရေ ၁ သန်းကျော် ရှိပြီဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် အစိုးရသည် တောင်ပိုင်းနယ်စပ်မှတစ်ဆင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများ အရေအတွက် တိုးပွားလာခြင်းနှင့် ရုန်းကန်နေရသည်။
ဘိုင်ဒန် အစိုးရသည် သမ္မတဟောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒများစွာကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သော်လည်း နယ်စပ်အဆောက်အအုံများတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်တားဆီးရန်အလို့ငှာ အထောက်အထားမရှိသော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများအား နှင်ထုတ်ရေးအတွက် CBP အား ခွင့်ပြုထားသော မူဝါဒတစ်ခုကိုမူ ဆက်လက်ထားရှိလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဓိကလာရောက်သူများမှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူလွတ်များဖြစ်ကာ စုစုပေါင်း ၁၁၇,၆၀၂ ဦးရှိကြောင်း၊ မိသားစု အရေအတွက်မှာ ၅၅,၈၀၅ စုရှိပြီး အဖော်မပါဘဲ ရောက်ရှိလာသည့် ကလေးအရေအတွက်မှာ ၁၅,၂၅၃ ဦးနှင့် အဖော်နှင့် လာရောက်သော ကလေးများမှာ ၁,၁၅၅ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဝင်ရောက်လာသူ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခင် ၁၂ လအတွင်း အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် လာရောက်ခဲ့သူများဖြစ်ကြောင်း CPB က ဆိုသည်။ (Xinhua)
Migrant encounters at U.S. southern border reach yearly high in June: CBP
WASHINGTON, July 16 (Xinhua) — The number of migrants encountered at the U.S.-Mexico border reachedayearly high in June, according to new statistics released Friday by U.S. Customs and Border Protection (CBP).
Thirty-four percent of encounters in June 2021 were individuals who had at least one prior encounter in the previous 12 months, CPB said. Enditem
Photo 1 : Photo taken on March 30, 2021 shows migrants attempting to cross the Rio Bravo river on the border between Mexico and the United States, from Ciudad Juarez, Mexico. (Photo by David Peinado/Xinhua)
Photo2: Photo taken on March 9, 2021 shows migrants attempting to cross the border between Mexico and the United States, from Ciudad Juarez, Mexico. (Photo by David Peinado/Xinhua)